Tags : မောင်တို့ မောင်တို့ ချယ်ရီမြေ ......
By : mrcastle on Feb 27, 2010
Score: 95 Rating: 5.00 Comments: 21
ဒီသီချင်းလေးက ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ မောင်တို့ချယ်ရီမြေထဲက သီချင်းလေးဖြစ်သလို ဇာတ်ကားထဲက ဆိုသွားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းနေရာလေးက ကျွန်တော်တို့မန်းလေးက မန်းသီတာဥယျာဉ်ထဲမှာဗျ ။ ခုတော့ ရှိတော့ဘူး ကျွန်တော်တို့ နှစ်တန်းလောက်က ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ ။ မန်းလေးအလွမ်းပြေဖြစ်သလို ပြင်ဦးလွင်ကို ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့အရမ်းလှတဲ့သီချင်းလေးပါဗျာ ။
Taw_Thar_Lay on Mar 2, 2010 0
Very much like original. ***** :-)
Really nice2listen ..love it ... arr pay thwar par tel shint ... 5*4u :)))))
aungtun1 on Feb 28, 2010 0
whatabeautiful singing,,,, i wa dissolved in the song bro,,, this is the best version ever i've listened,,,, i mean it bro,,,,,,, All stars for you bro***********************
sithunaung on Feb 28, 2010 0
sweetorchid on Feb 28, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးက Bro Castle ဆိုထားတာ မျိုးကျော့မြိုင် တောင်အားနာတယ်ပြောရမှာ (My Favorite Singer) ဆိုထားတာထက်ကောင်းတယ် Bro Yae... ဆိုဟန်ကအရမ်းလှတယ်နားထောင်ရင်းနဲ့ တောင် ကျက်သီးထလာတယ်ကောင်းလွန်းနေလို့ အရမ်းနှစ်ခြိုက်တယ် အရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းကို အဲ့လိုတန်ဖိုးထားပြီဆိုထားလို့ Thank u par shinn...
Wooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwww Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy******************************* Bravoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo************************ Kg Like Tar .. Bro Castle yay... One of your Best songs. Man .... great Job.. I also love this song.. You sing Better than Ringo Man.. ..... Cheer *********** you are Pro singer here .. you sing really Like U Win Oo... I really Love it .. I added in my favorites man .. ******
lovelybaby11 on Feb 27, 2010 0
greenlay on Feb 27, 2010 0
မောင်လေးဆိုထားတာလည်း ကောင်းချက်က မဆန့်ပါပဲနော် *****
orange on Feb 27, 2010 0
very very nice to listen bro
yizaw on Feb 27, 2010 0
skywalker on Feb 27, 2010 0
panshwe on Feb 27, 2010 0
pyaw sa yar ma lo ag ko kg tae.. song lay ayan hla tae , bro vocal nae` lae perfect pae.. ****************************
hippo on Feb 27, 2010 0
ဟုတ်ပါ့ bro Mrcastle ရေ ... hippo လည်း အရမ်းကြိုက်တဲ့ သင်္ကြန်ဇာတ်ကားလေးပါ ... bro ဆိုထားတာ အရမ်းနားထောင်လို့ ကောင်းတယ် ... ***** :)))))
အရမ်းကို နားထောင်လို့ ကောင်းတယ်..Mr.Castle Gyi ဆိုထားတာ.....ကျတော်လည်းကြိုက်လို့...MKM version နဲ့ ဆိုလိုက်ပြီဗျ.....5*4yr great singing...PERFECT ONE par.
susannyunn on Feb 27, 2010 0
d song lay ko kyar tot..nge nge ka SUNDAY nait khin tay maramyel kyi ya te...မောင်တို့ချယ်ရီမြေ movie ko ta di ya mi par yelz... nout p..."yan ag win oo ar noe " ko lelz thwar p myin mi te....aheeeeee:))) :D :P.dsong yelz zzat win khan lay ka tot very romantic par.. pan p myin yaung lar lout ag ...sho thwar tar ka tot.....brilliant par pelz chint.....million starz for u par avatar g f4 g yay..>>>>
melody_queen on Feb 27, 2010 0
atann ka taw .. shae ko lann tar naw... taw taw kyi ko mite tar ... sing htar tar original song htet taung po kg tal.... ayann ayann ko khait twar p.. :) . .. amyae arr pay nay mal naw.. :) .. 5* for you.. :)
kounghtetsan on Feb 27, 2010 0
ကောင်းလိုက်တာဗျာ.. အစ်ကိုရေ.. တစ်ကယ်ကို နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့.. သီချင်းလေးပါပဲဗျာ.. နားထောင်ရတာ.. မိုက်တယ်ဗျာ.. ဂွတ်ဂွတ်.. အစ်ကိုရေ.. အားပေးသွားပါတယ်.. 5********* ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
nanwarwarmg on Feb 27, 2010 0
KoBurma on Feb 27, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးက ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ မောင်တို့ချယ်ရီမြေထဲက သီချင်းလေးဖြစ်သလို မန္တလေးအလွမ်းပြေဖြစ်သလို ပြင်ဦးလွင်ကို ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့အရမ်းလှတဲ့သီချင်းလေးပါဗျာ ... .အသံအရမ်းကောင်းဒယ် ... ဆိုထားတာလဲ လန်းဒယ် ...၅စတားစ် .... ဒဂယ်ပြောတာ ... :P:):D
Phyogyi on Feb 27, 2010 0
nyi..Castle..lay..yay...Really...Really...Really...Nice and Cool..par pelz..byar...Kaung lite telz. .Singing. .par byar I can't find anyword for this singing..:)))))..Luv..it..:)))Like..it..:)))))))...Match. .with ur Cool Vocal..par byar..:))....************ *****************************..for.. nyi..Castle..yay..:)))...ko Phyogyi....
paradise on Feb 27, 2010 0
Great as always !!! Perfect with your vocal......!!